October 17, 2017 in Oromia
STN Somali TV : Daandi Bosontuu.
“Guyyoota 20 oliif na gudeedan, abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku” “Guyyoota 20 oliif na gudeedan, abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku,” dararaa cimaa dubartii Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraataa turte irratti raawwatame, akka rippoortarri BBC Afaan Oromoo kaampii Hammaarreessaa daawwate odeeffatetti. Odeessa guutuu dubbisuuf geessituu gadii cuqaasaa. Baqattoonni Oromoo 4,000 […]
U.S. Congress Should Call Ethiopia’s Bluff Addis Ababa has halted a human rights resolution in the House by threatening to break off security cooperation with the United States. (Freedomhouse) — When Congressman Mike Coffman (R-CO) addressed a gathering of mostly Ethiopian-origin constituents in late September, he told them that according to the Ethiopian ambassador in Washington, Ethiopia […]
QEERROO FI QARREEN QAROODHAA !!! QAROON BIYYAA HEGAREEDHAA !!! SEENAA Y.G (2005) Sochiin warraaqisaa Ummata Oromoon Biyya keessaa gaggeeffamaa jiru guyyuu jabaachaa deemaa jira. Toftaa fi tarsiimoon barbaadamus akkasuma. Qabsoon Oromoo jabaachaa deemuun, qaama sadii uumuun haqa. Qabsoon sabasaa jabaachutti ka gammadu. Diina qabsoo Oromoo sodaatu Isa gidduu mumunyuuquu ykn hinaaffuuf, dhiphuu itti uumuun waa hin […]